Saddex qodob oo Farmaajo uu kula colloobay Warbaahinta! | KEYDMEDIA ONLINE
Saddex qodob oo Farmaajo uu kula colloobay Warbaahinta!
Farmaajo ayaa mudada u hartay doonaya inuu ku burburiyo sumcadda dad bulshada magac iyo mansab ku leh.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa si aad ah u colaadiyay suxufiyiinta Soomaliyeed, kadib markii uu ka waayey dano gaar ahaa oo uu ka lahaa.
Warbaahinta ayaa Farmaajo wareysan jirtay xilligii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna xilligaasi ahaa mucaarad xargaha goostay.
Markii xilka loo doortay, bishii Febraayo 2017, ayuu Farmajo kulan gaar ah wuxuu la qaatay inta badan wariyeyaasha iyo madaxda warbaahinta Soomaaliyed, isaga oo kala hadlay in la buun buuniyo dowladdiisa.
Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa aqbashay, halka kuwo kalena ay diideen arrinkaasi, waxaana dhacday in Farmaajo uu dagaal dadban la galo kuwii diiday, illaa uu ka jaray meelihii ay ka heli jireen qarashaadka.
Isaga oo dagaalkaasi ku jiray ayaa hadana waxay dowladdiisa Labadii sano ee u dambeysay qarashaadkii ka jaratay warbaahin iyo wariyeyaal si gaar ah lacago looga siin jiray Villa Somalia, kadib markii danihii ay lahaayeen ka gaareen.
Hadaba Farmaajo ayaa kula dagaalsan warbaahint Soomaaliyeed arrimahan.
1- Iney ka diideen aflagaadeynta siyaasiyiinta mucaaradka ah
2- Iney been u sheegaan shacabka, lagana dhaadhiciyo in dowladdiisu qabatay shaqo aan jirin.
3- Ka hadlidda warbaahinta arrimaha dowladd Farmaajo qaban weyday, sida ammaanka iyo arrimo kale.
Hadaba Farmaajo oo ay dhibtay weysmada wixii uu doonayey, islamarkaana aan u adkeysan dhaliisha siyaasiyiinta aaa ugu dambeyn wariyeyaashii Soomaaliyeed ku tilmaamay "Al-shabaab".
Dad badan oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa ku tilmaamay in tani ay u muuqata in Farmaajo aanu sharaf iyo sumcad dambe ka lahayn dalka, islamarkaan bilaha u haray uu doonayo inuu ku sumcad dilo dad badan oo suxufiyiinta ay ka mid yihiin.